Kuuriyadda Waqooyi oo Jeneraal usoo dirtay Cayaaraha Olombikada iyo Trump oo Gabadhiisa usoo diray. | SAHAN ONLINE
Kuuriyadda Waqooyi oo Jeneraal usoo dirtay Cayaaraha Olombikada iyo Trump oo Gabadhiisa usoo diray.
PYEONGHANG -Waqooyiga Kuuriya ayaa u dirtay mid ka mid ah Generaalada ugu sareeya ciyaaraha Olompikada ee xiliyada qaboobaha ee ka socda magaalada Pyeongchang ee koonfurta Kuuriya, halka madaxweynaha Maraykanka uu u diray gabadhiisa Ivanka Trump.
General Gen Kim oo hoggaamin doona waftiga waqooyiga Kuuriya, wuxuu madax ka yahay sirdoonka wadankaasi, waxaana la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxadii ka dambaysay weeraro lagu qaaday Kuuriyada koonfureed.
Dhinaca kale, waftiga maraykanka ee ka qaybgalaya gabagabada ciyaaraha, waxaa hoggaaminaysaa gabadha uu dhalay madaxweynaha maraykanka Ivanka Trump.
Saraakiisha Kuuriyada koofureed waxay sheegeen inuusan jiri doonin kullan rasmi ah oo dhexmari doona wufuuda Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya. Hase yeeshee waxaa jira walaac laga qabo in Kuuriyada waqooyi ay u adeegsanayso ciyaaraha Olypikada inay kor u qaado sumcadeeda beesha caalamka
Furitaankii ciyaaraha Olypikada ee bishan waxaa ka qaybgalay Madaxweyne ku-xigeenka Maraykana Mike Pence iyo gabadh la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada waqooyiga Kuuriya Kim Yo-jong.